भक्तपुरमा घट्यो अनौठो घटना, स्थानीयवासी परे अचम्म, मच्चियो हल्लीखल्ली ! – Khabar PatrikaNp
भक्तपुरमा घट्यो अनौठो घटना, स्थानीयवासी परे अचम्म, मच्चियो हल्लीखल्ली !
August 8, 2020 168
भक्तपुर नगरपालिका–६ भेलुखेलस्थित द्यौलाबस्तीमा आज बिहान ह’तियारसहित नेपाली सेना र प्रहरी टोली पुग्दा स्थानीयवासी नियमित काममा व्यस्त थिए । प्रहरी देखेपछि किन आए प्रहरी भन्नेबारेमा खैलाबैला भयो । आफ्नै छिमेकीको घरमा एक कोरोना सङ्क्रमित भएर बस्ती सिल गर्ने तयारीका लागि प्रहरी आएको पौने ८ बजेमात्रै थाहा पाए ।
महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सविन प्रधानको नेतृत्वको टोली ७ : ३० बजे भेलुखेल पुग्दा बस्तीमा कुनै त्रास थिएन, मान्छे ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए, बालबालिका खुला ठाउँमा निर्वाध खेलिरहेका थिए । बस्तीमा बिहानको चहलपहल बाक्लो थियो । जब बिहान ८ बजे प्रहरीले बस्ती सिल गर्ने तयारी गर्दै स्थानीयवासीलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरे तब बल्ल स्थानीयवासीमा एकाएक त्रास फैलियो । स्थानीयको त्रास देखेर प्रहरीले मनोपरामर्श दिन थाले ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भक्तपुरका एक पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमितको पुष्टि गरेपछि मंगलबार नै भक्तपुरमा हल्लीखल्ली भयो । भक्तपुरका चारैतीरबाट कहाँको मान्छे होला भन्ने खोजी र त्रास एकैपटक फैलियो । स्थानीय बासिन्दा हो कि, बाहिरबाट आएको मान्छे हो कि, आफ्नै गाउँमा पो प¥यो कि भन्ने त्रास चारवटै नगरपालिका बासिन्दामा रह्यो ।
भक्तपुर नगरपालिका–५ भेलुखेलस्थित द्यौलाबस्तीमा ४२ वर्षीय स्थानीय एक पुरुषलाई पिसिआर परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि बुधबार बिहान नेपाली सेना र प्रहरीको टोलीले बस्ती सिल गर्दै । तस्वीर ः रमेश गिरी
साँझ पछि भक्तपुर नगरपालिकाभित्रको भन्ने जानकारी आएपछि आरडिटी र पिसीआर परीक्षण गराएका टोलटोलका जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीय बासिन्दामा त्रास फैलियो । को हो त सङ्क्रमित भन्ने पहिचान नहुँदा त्रासका बीच बित्यो सिङ्गो रात । त्यो अवधिमा भक्तपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षाकर्मीदेखि पत्रकारसम्मलाई भक्तपुर कहाँको मान्छे सङ्क्रमित भनेर तारन्तार फोन आउँथ्यो । तर, सबैको एउटै जवाफ आउँथ्यो अझै पत्ता लागेको छैन ।
सुरक्षा निकायले सङ्क्रमितका बारेमा राति मात्रै पत्ता लगायो । मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनपछि भक्तपुरका सुरक्षा निकायले समेत सङ्क्रमितको पहिचान र ठेगाना पत्ता लगाउन नसक्दा सुरक्षाकर्मीसमेत राति अबेरसम्म रणभुल्लमा परेका थिए । जब मध्यराति १ः३० बजे भक्तपुर नगरपालिका–५ भेलुखेलका ४२ वर्षीय एक पुरुषलाई आइसोलेटेड एम्बुलेन्समा राखेर बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको आइसोलेसनमा लगियो तब मात्रै सुरक्षा निकाय ढुक्क भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले विगतका दुई सङ्क्रमितको छिटो पहिचान हुँदा बस्ती सिल गर्न र ट्रेसिङ गर्न सहज भए पनि मंगलबार भने राति अबेरसम्म पहिचान गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिकामा फोहर बोक्ने सवारी चालकको काम गर्दै आएका उहाँको महानगरपालिकाले यही जेठ २ गते गरेको स्वाब सङ्कलनको पिसीआर परीक्षणमा पोजेटिभ रिपोर्ट रहेको मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक भयो । सङ्क्रमित व्यक्ति को हो भन्ने जानकारी मध्यराति मात्रै पाउँदा बस्तीमा धेरै जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन् ।
यो खबरले भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्र निकै तरङ्गित बन्यो । भक्तपुरमा सफाइ मजदुर भेलुखेलबाटै जाने भएकाले भक्तपुर नगरपालिकामा पनि सङ्क्रमण फैलिन सक्ने त्रास नगरपालिकामा रहेको छ । मध्यराति पहिचान भएपछि सुरक्षा निकायले आज बिहान ८ बजे भेलुखेल पुगेर बस्ती सिल गरेको छ । बस्ती सिल भएका क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षाकर्मीले बस्तीभन्दा बाहिर आउन दिएको छैन । स्थानीय बाबुरत्न द्यौलाले आफ्नो बस्तीमा बिहान ८ बजे एकैपटक हतियार बोकेका सेना र प्रहरी आएर तैनाथ हुँदै घर बाहिर ननिस्कन भनेपछि छक्क परेको बताउनुहुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको नाम र बस्तीबाट सङ्क्रमित व्यक्ति भनेर लगिएको व्यक्तिको नाम फरक परेको स्थानीयवासीको दाबी छ । सुरक्षा निकायका अनुसार सङ्क्रमित भनिएका व्यक्तिको नामको बीचको शब्द फरक परेर नाम आउँदा राति अबेरसम्म सङ्क्रमित पहिचान गर्न गाह्रो भएको हो । प्रहरीले बस्ती सिल गरेसँगै आजै बस्तीमा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको पहिचान गर्ने र परीक्षण गर्ने तयारी गरेको प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।
लकडाउनले नछोएको यो बस्तीमा दिनभर मानिस हिँड्ने, बजार खोल्न कुनै रोकतोक कसैले गरेको थिएन । फलस्वरुप सङ्क्रमित भनिएका व्यक्ति आफ्नो समाज र बस्तीमा सहजरूपमा हुलमिल भएको पाइएकाले अरुको ट्रसिङ र परीक्षण गर्न कठिनाइ भएको सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ । बलम्बुको आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित भनिएको व्यक्तिले आफूले राति १० बजे यसबारे थाहा पाए पनि राति १ः३० बजे मात्रै एम्बुलेन्स लिन आएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि चाँगुनारायण दुवाकोट बस्ने एक २७ वर्षीय पुरुष सशस्त्र प्रहरी र सुनसरीबाट मध्यपुरथिमि शङ्खधर चोकमा साथीको कोठामा बसेकी २५ वर्षीया महिलामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको थियो ।
Nextभारतको केरलामा विमान दुर्घटना १७ जनाको मृत्यु,क्याबिन क्रुका चार जना सदस्य सकुशल
आफ्नो सन्तान स्वस्थ्य र भाग्यशाली होस भन्ने चहानुहुन्छ …? यो अचुक उपाय अपनाउनुहोस
ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि राजधानीका चोक-चोकमा डमीले गाउनेछ ट्राफिक गीत
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा बुधबार राति गएको बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएकामध्ये अहिलेसम्म १० जनाको शव फेला
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट भारतमा मन्त्रीको मृ’त्यु ………!
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33605)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33323)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (29021)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (27287)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25137)